KTM | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, pictures, ratings, reviews and discusssions
စက်ဘီး, အစိတ်အပိုင်းများ, ပစ္စည်းများ, ဝန်ဆောင်မှု, အားလုံး Ducati အပေါ်သတင်းများ, KTM နှင့် Husaberg…
2009 KTM 990 ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း @ ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းဆိုင်ကယ်စီးပြိုင်ပွဲ T ကမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်သုံးသပ်
နေအိမ် → KTM
အခုလည်း: KTM | 20 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် KTM 450 အမိန့်ချီတက်ပွဲပုံတူရှိနိုင် – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ယူအက်စ်အေ
အခုလည်း: KTM | 20 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် ပထမဦးစွာရလဒ်ပြသမှု: 2005 KTM 125 SX နှင့် 250 SX – Transworld Motocross
ပထမဦးစွာရလဒ်ပြသမှု: 2005 KTM 125 SX နှင့် 250 SX အသစ်ကစက်ဘီးရာသီအပြည့်အဝလွှဲချဉ်းကပ်အဖြစ်, စီးနင်း၏ TWMX စမ်းသပ်ခြင်းန်ထမ်းများရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်နေ့နှင့်အတူသုံးစွဲခဲ့သည် 2005 KTM two-stroke lineup. Inaworld that now seems dominated by thumpers, after spendingafull afternoon roosting around Perris Raceway we’re here to say that two-strokes ain’t dead just yet! [IMAGE 1] Already heralded as one of the few remaining competitive two-cycles in its class, the KTM125 SX steps up to the plate in 2005 more ready than ever to challenge its four-stoke rivals. For starters, handling has been much improved thanks to an all-new frame and suspension package, which the 250SX also enjoys. [IMAGE 2] ...
အခုလည်း: KTM | 19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် KTM 350 နှင့် 450 SX-F ကို – သံသရာ torque မဂ္ဂဇင်း
နယူးအလို့ငှာ Todd ရိဒ်အားဖြင့်စမ်းသပ်ခြင်း. Pics by Chris Pickett The release of the all new KTM 350SX-F has sparked worldwide interest and is the latest open class racer from the KTM factory. Inspired by MX legend Stefan Everts, the 350cc four-stroke is aimed at taking control of the 450cc MX class and is KTM’s flagship model in the big-bore category. An all new creation from the ground up, the 350 has got all the bells and whistles, and is arguably one of the most creative and innovative production bikes in recent history, and it’s already got runs on the board by winningaworld championship. A 350cc thumper up againstapack of 450s is no easy task, and it’savery ballsy move by KTM to campaign ...
အခုလည်း: KTM | 19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2010 KTM 300 XC-W ဆန်းစစ်ခြင်း –
ကိုယ့်အဆုံးစွန်သစ်တောပြိုင်ကားသမားထက်ပို ဒန်ပဲရစ်အားဖြင့်ဓါတ်ပုံများ off-လမ်းပြိုင်ကားအခုအချိန်မှာကြီးမားဖြစ်ပါသည်, cross-တိုင်းပြည်နှင့် Endurocross-ပြိုင်ကားစိတ်ပြင်းထန်ခြင်းစ moto မီဒီယာနဲ့ပေါက်. In those stories, look closely at the photos. Chances are you’ll see one bike more often than anything else: အဆိုပါ KTM 300 XC, or its wide-ratio transmission brother, the 300 XC-W. Despite the four-stroke revolution, KTM has remained committed to improving the two-stroke engine, and for good reason. Low cost, low noise, simplicity and the good old-fashioned power to weight ratio are the strong selling points that KTM has cashed in with their extensive line of two-stroke machines. The 300 starts easily, but in case you are ...
အခုလည်း: KTM | 19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် KTM ရောင်းတော်မူမည် 2013 690 Duke ပြီးတော့ 990 မြောက်အမေရိကခုနှစ်တွင်စွန့်စားမှုဘာဟာ & Models
KTM ရောင်းတော်မူမည် 2013 690 Duke ပြီးတော့ 990 မြောက်အမေရိကခုနှစ်တွင်စွန့်စားမှုဘာဟာ & Models KTM များအတွက်နှစ်ဦးက New Street, & Models ကြေညာ 2013 Murrieta, , CA KTM မြောက်အမေရိက, Inc မှ. is excited to announce two new street models, the 690 Duke and the 990 Adventure Baja to the North American street market for 2013. 690 Duke KTM is excited for the return of KTM’s most popular naked bike, the 690 Duke. Whether you areastreet rider, commuter oratrack day rider this bike offers superb handling and unadulterated riding pleasure. The 690 Duke isanew model for the US and Canadian markets for 2013 and featuresalow seat height of 32.9 inches to allow for more rider comfort. The engine has been redesigned with ...
အခုလည်း: KTM | 19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် စက်ဘီး, အစိတ်အပိုင်းများ, ပစ္စည်းများ, ဝန်ဆောင်မှု, အားလုံး Ducati အပေါ်သတင်းများ, KTM နှင့် Husaberg…
အဆိုပါကမ္ဘာအများဆုံးစွယ်စုံခရီးသွားအန်ဒူရို စတင်ချိန် မှစ. ညာဘက်, အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအပြိုင်အဆိုင်ကနေအသိပညာ၏အလျှော့လွှဲပြောင်းလမ်းကြောင်းကိုချွတ်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်, the KTM Adventure series has always beenafew lengths ahead of all the other travel enduros. it quickly established itself as the ideal two-cylinder enduro for extreme tours and tough off-road riding. in an exceptional development effort, KTM has now put together the new 1190 အဖြစ်အပျက်, whose versatility in every respect will define new standards in the travel segment without sacrificingasingle foot of ground where performance is concerned. To the contrary: at 150 hp of power andaweight of only 230 kg fully fuelled, the latest ...
အခုလည်း: KTM | 19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် KTM Duke-based ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းဆိုင်ကယ်စီးပြိုင်ပွဲစူးစမ်း! – Overdrive
KTM Duke-based ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းဆိုင်ကယ်စီးပြိုင်ပွဲစူးစမ်း! ရှင်းရှင်းလင်းလင်း KTM Duke ပလက်ဖောင်းပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦး supermotard ၏ဤပုံရိပ်တစ်ခုဥရောပ KTM ဖိုရမ်အပေါ်ပေါ်ထွန်း. KTM CEO Stefan Pierer has often spoken of the company’s plans with Bajaj Auto revealing the nakeds (already out), the sports bikes (coming to Auto Expo most likely) and the enduro bikes (likely late 2014 or early 2015). Butasupermotard has never been mentioned. Historically the supermotard format wasadelicious confection born from the addition of street wheels (going fromaspoked 21 front/19 rear to an alloy 17 inch set), tyres andabigger front brake toadirt bike. They were raced on part-dirt and part-tarmac courses. They have also proved to be ...
အခုလည်း: KTM | 19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2012 KTM 450 SX-F ကိုစက်ရုံ Edition ကို- ရလဒ်ပြသမှုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းစီးနင်း
2012 KTM 450 SX-F ကိုစက်ရုံ Edition ကို - စီးရလဒ်ပြသမှုတစ်ဦးက Dungey ပုံတူ, KTM ရဲ့ Next ကို-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ 450. ဓာတ်ပုံဆရာ. Jeff Allen Kevin Cameron could writeabook about how racing helps funnel technology to production motorcycles. That book would be very informative, but he hasn’t written it, so we can’t read it. Luckily, all that motocross racers have to do is just look at KTM’s new 450 SX-F Factory Edition and see that it’s purposely built for professional racing but available for the eager consumer. Only 400 are being sold in the U.S. though, so if you don’t already have one, you may be too late. You probably want to know about the Factory anyway, because it is nothing like the ...
အခုလည်း: KTM | 19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2009 KTM 990 ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း @ ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းဆိုင်ကယ်စီးပြိုင်ပွဲ T ကမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်သုံးသပ်
Specifications: နိဒါန်း ငါတို့သည်သူတို့ပြုသောအမှုဖွင့်သည့်အထင်ကြီးစရာအလုပ်အားဖြင့်သာအံ့သြနိုင်ပါတယ်, အခြေခံကျကျဟာပြောင်းလဲမသာ 990 ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းဆိုင်ကယ်စီးပြိုင်ပွဲမော်ဒယ်များ, but in paving the way toanew category of touring motorcycles. KTM’s Supermoto machines are acknowledged around the world as the best in the business, ဒါပေမဲ့, by their nature, these are meant to be ridden on the long haul so that is what the Touring version is here to fix. It uses the impressively light (58 ကီလိုဂရမ်) and compact LC8 engine mounted on the chromium-molybdenum frame (11 ကီလိုဂရမ်) as well as the WP chassis, but addsahalf fairing and windscreen on top of that, making it ideal for long travels, be them on or even off the roads. History ...
အခုလည်း: KTM | 19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် စမ်းသပ်ခြင်း KTM Duke 690 2012: ဆိုးဆိုးရွားရွား Mono အဘိဓါန်ယဉ်ကျေးမှု
စမ်းသပ်ခြင်း KTM Duke 690 2012: ဆိုးဆိုးရွားရွား Mono အဘိဓါန်ယဉ်ကျေးမှု ဇူလိုင်လ 7, 2012 | အောက်မှာ Filed: KTM | Posted by ကို: Rao က Ashraf အဆိုပါ KTM Duke 690 အတွင်းသိသိသာသာတစတစတိုးတက်ပြောင်းလဲလာ 2012. KTM redefined its concept of supermotard mono lorry driver to make it more accessible to the daily newspaper, easier to control and more accessible with the purchase. KTM Duke 690 2012 does not remain about it less one looked motor bike, fun, effective and very powerful! Let us see that immediately… KTM has surprised its world at the end of 2011 by revealinganew version of its KTM Duke 690 2012 turning the back with the concept of super motored road extreme. Halfway between the supermotard and the sporting roadster, there were all the sorrows ...
Ducati Diavel Ducati 60 Ducati Desmosedici GP11 ဆူဇူကီး Colleda CO ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 စမတ် eScooter ဟွန်ဒါ DN-01 Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် Moto Guzzi 1000 Daytona Injection စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down Brammo Enertia ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို Bajaj Discover တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic Aprilia Mana 850 ဆူဇူကီး AN 650 သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix စက်ဘီး Kawasaki ER-6n မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto